नेपाल आज | कालो कपाल किन सेतो हुन्छ ?
कालो कपाल किन सेतो हुन्छ ?
बुधबार, ०१ असोज २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज (ADM)
कालो अनि लामो कपाल सुन्दरताको प्रतीक हुनुका साथै शारीरिक रुपमा स्वस्थ शरीरको परिचय पनि हो । तपाईंको कपाल कालो, लामो र चमकदार छ भने निश्चय नै तपाईंको व्यक्तित्व सुन्दर र प्रभावशाली छ । यदि समयभन्दा पहिला नै कपाल सेतो भएमा तपाईंको व्यक्तित्वमा ठेस पुग्नुका साथै आफ्नो उमेरभन्दा जेठो देखिनु हुन्छ । जसका कारण हीनभावनाको शिकार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
आधुनिक युगमा धेरै मानिस समयभन्दा अघि नै आफ्नो कपाल सेतो भएकोमा चिन्तित देखिन्छन् । यस्तो चासो युवायुवतीमा अधिक रहेको पाइन्छ । फलस्वरुप उनीहरु कपाल कालो र राम्रो बनाउन पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित विज्ञापनबाट प्रभावित भएर बजारमा आएका सामग्रीको अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्छन् । यस्ता सामाग्रीले टाउको र छाला मात्र नभई समग्र स्वास्थ्यमा नै गम्भीर असर पुर्याउने गर्छन् ।
बृद्धावस्थामा कपाल सेतो भएमा त्यो चिन्ताको विषय रहँदैन् । तर किशोर वयमा कपाल फुलेमा यसले चिन्ता बढाउँछ । वृद्धावस्थामा कपाल सेतो हुनुको कारण कपाललाई प्राकृतिक रंग प्रदान गर्ने जीवाणुको संख्यामा कमी हुनु वा उनीहरुको कार्यशक्ति समाप्त हुनु नै हो । वृद्धावस्थामा कपाल सेतो हुनुको कारण यौन ग्रन्थीमा एउटा मुख्य प्रकारको हार्मोन रोकिन जानु पनि हो । यस्तो भएमा पहिला टाउकोमा तिलचामले कपाल हुँदै पछि गएर पुरै सेतो हुन्छ । वंशाणु, खानपान र रोगका कारण किशोर अवस्थामै कपाल फुल्ने आम बन्दै गएको छ । शहरी परिवेशमा हुर्किएका केटाकेटीमा यस्तो समस्या आम बन्दै गएको देखिन्छ ।
कुपोषण, मानसिक कमजोरीले पनि यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुनपुग्छ । यसवाहेक शरीरमा रगतको कमीले पनि कपाल फुल्ने समस्या आउने कतिपय चिकित्सकको तर्क छ । मस्तिष्क र टाउकोमा रगतको मात्रा कम भएमा पनि त्यसको असर कपालमा देखिन्छ । जसका कारण कि कपाल खुइलिन्छ कि त फुल्छ । यसबाहेक धेरै चिन्ता गर्नु, कब्जियत हुनु, अधिक मात्रामा चाया पर्नु , टाउको सफा नहुनु र टाउकोको छालामा अनेक रोगका कारण कपाल सेतो हुने समस्या देखा पर्छ । बच्चाहरुको कपाल सेतो हुनु पछाडि पनि विभिन्न कारण छन् । जस्तो पेटभरि खाना नपाउनु , भोजनमा आइरनको कमी हुनु , भिटामिन ए, बी र डीको कमी हुँदै जानु प्रमुख कारण हुन । बच्चाहरुको कपाल सेतो हुनबाट जोगाउन उनीहरुको पौष्टिकतामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
कपाल सेतो हुनुका अन्य कारण मध्ये साबुन र स्याम्पुको अनावश्यक प्रयोग पनि हो । कोही कपालको सफाईमा ध्यानै दिँदैनन् भने कोही यति गम्भीर हुन्छन् कि बजारमा आएका नयाँ नयाँ साबुन सेम्पु किन्न थुप्रै पैसा खर्च गर्छन् । भिटामिन बी कम्प्लेक्स, फोलिक एसिड, पेराएमी नोवेजोइक एसिड र पेटोनेनिक एसिडले कपाललाई कालो बनाउन मद्दत गर्छन् । यदि यस्ता एसिडहरुको दिनहूँ सेवन गरेमा कपाल कालो भइरहने सम्भावना छ । यदि यस्ता एसिड गहुँ, दही जनावरको मासुबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । तपाईं आफ्नो कपाल कालो र स्वस्थ राख्न चाहनु हुन्छ भने सर्वप्रथम कपालको सफाईमा ध्यान दिन जरुरी छ । सस्तो र निम्नस्तरको साबुन र स्याम्पु प्रयोग नगर्नु जाति हुन्छ । जरुरी परे चिकित्सकको सल्लाह सुझाव लिनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।
कालो कपाल बृद्धावस्था
धार्मीक तथा पर्यटकीय नगरी जनकपुरमा लामखुट्टेको आतंक
एचआईडिसिएलको सिईओमा कुलमानलाई नियुक्ती गर्ने तयारी
वार्ता टोलीको ३ बुँदे सहमति अनुमोदन, विप्लवमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा
बिहिबार, २० फागुन २०७७
प्रधानमन्त्री पदले कांग्रेसको ढोका ढकढकाइरहेको छ, हामी झ्यालवाट हेरीरहेका छौंः विश्वप्रकाश
सरकार आगलागी पीडितको साथमा छ : मुख्यमन्त्री राई